Kolonzo Misayoka:-Hogaamiyihii ka maqnaada kulanaka 9-Janaayo waa ........................
Kulankii 5-bisha Janaayo,2004 ee wasiirada Arrimaha Dibada IGAD ee ka dhici lahaa maanta magaalda Nairobi Grend Regency Hotel ayaa baaqdey, ka dib markii ayen ka soo qayb galin Wasiirada Arrimaha Dibada ee Itoobiya, Eareteria ,Suudaan iyo Uganda oo leh Sanadkan Madaxtinimda Kursiga Gudoomiyaha Urur Goboleedka IGAD.
Wasiirada Arrimha Dibada ayaa kulankooda ku saabsanaa diyaarinta Ajendaha Kulanka,goobtii iyo tirada dadka ka qaybgalaya iyo sida loo kala qiimeynaya kuraasta loogu tala galey dadka ka qayb galaya kulanka iyo kala sifeyntooda.
wasiirka arrimaha dibada ee dalka Kenya ayaa saakey sheegay in kulanka uu dhacayo maalinta 9-bishan oo ay wali taagan tahay balantii ,waxaa kaloo uu sheegay in ay iman doonaan dhammaan hogamiyayaasha siyaasada Soomaalida oo jooga soomaaliya maalmahan soo socda.
Mr.Kolonzo Misayoka isagoo soo xiganaya Madaxweyne Musafeni iyo dhamaan Madaxweynayaasha dalalka dawladaha IGAD waxaa uu yiri in hogaamiyihii Soomaaliyeed ee ka soo qaybgali waayo kulanka 9-bishan Janaayo in uu yahay Nabaddiid, waxaa kaloo uu ku sheegay in kulan uu yahay kii ugu danbeeya madaama ilaa bishii Desember Dib loo dhigay kulanka Gooni U baxa Hogaamiyayaasha .
waxaa kaloo hadalka qaatey oo erayo saakey ka soo jeediyey Wasiirka Arrimaha Dibada Jabuuti Cali Cabdi Faarax waxaa ugu horeytii u mahad celiyey Dawlada Kenya ,hogaamiyayaasha Soomaalida waxa uu ka codsadey in kulanka kama dambeysta ah Yimadaan un fikiraan shacabkooda 14-sano dagaalka ku hoobtey.
intaa ka dib waxa kaloo la sheegay in shirka Nabada Soomaalida Goaan rasmi ah laga heli doonaa wasiirada Arrimaha Dibada IGAD labada Todobaad ee soo socota.
MORGAN:- Soomaaliya ayaa Dawlad ku dhisan doonaa haddii la isku m.....................
Hogaamiyayaasha ku sugan Madasha Shirka Nabada Soomaalida ayaa saakey kulan ku yeeshay Grend Regency Hotel ee Magaalada Nairobi.
kulanka saakey ayaa hogaamiyayaasha Soonaalida ku doorteen 5-hogaamiye oo la xaajoota wasiirada arrimha dibada ee dawladaha IGAD,waxayna kala yihiin:-
2-Cabdullaahi Yuusuf Axmed
3-Xasan Mxamed Nuur Shaati Gaduud
4-Xasan Abshir Faarax
5-Mawliid Macaani Maxamuud.
Hogaamiyayaasha Soomaalida ee Madasha Shira ayaa go'aankoodi hore wali ku taagan oo ahaa 24+Cabdiqasim iyo liiska Magacyada noo soo gudbiya iyo ajendaha Looga hadlayo Kulanka Gooni u baxa 9-bisha .
Hogaamiyayaasha ayaa shaaca ka qaadey hadii arrinkan la isku afgaran waayo in ay soomaaliya dib ugu laaban doonaan ka dibna halkaasi dawlada lagu dhisi doono.
suaalo ka hadlaya cida soo casuuntay iyo agaasinka shirka IGAD iyo Dawlada Kenya ayuu Maxamed Saciid Xirsi Morgan oo ku hadlayey Magaca Hogaamiyaasha ayaa sheegay IGAD iyo Beesha Caalamka Shirka iyaga malaha ee Soomali ayaa iska leh, iyaga waa caawiyayaasha shirka haddii wax intaa ka badan la yimaadaan anagu ka yeelimeyno, dhulaka waa Soomaali ,Dadku waa Soomaali ,Soomaali iyadaa ayaheeda ka tashaneysa.
SomaliTalk.com | Jan 5, 2004 |